သင်ဒုက္ခတစ်ခု ကြုံနေပါသလား ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ရဲ့ ဆုံးမထားတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ
သင်ဒုက္ခတစ်ခု ကြုံနေပါသလား ဆရာတော်ဦးဗုဓ်ရဲ့ ဆုံးမထားတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ တစ်နေ့ သောအခါ ဆရာတော် ဦးဗုဓ် ၏ မယ်တော်ကြီး သည် မိမိ နေ အိမ် မီးလောင်သွားသော ကြောင့်သာ ဦးဇင်း ထံ သို့ ပြေး လာပါတယ်။ သူ့ခဗျာ မုဆိုးမကြီး ဆိုတော့ အားကိုးလဲ မရှိ ရှာပါဘူး။ အဲဒိအတွက် သားဦးဇင်း ထံ အားကိုး တကြီး နဲ့ ပြေး လာတာ ပါ ။ အဲဒိ အချိန်မှာ ဆရာတော် ဦးဗုဓ် က မင်းကိုးကွယ် တဲ့ ဆရာတော် ဖြစ်နေပါပြီ ။ မယ်တော်ကြီး အတွက်နေစရာ …
သင့်မွေးဂဏန်းကပြောသော သင့်အကြောင်း ၁ မှ ၉ အထိ ရှိပါသည်။ အတွဲဂဏန်းများ ဆိုလျှင် တစ်လုံးထဲဖြစ်အောင် ပေါင်းပါ။ဥပမာ ၁၇ ဆိုလျှင် ၁+ ၇ = ၈ ဂဏန်းသမားဖြစ်သည်။ ဂဏန်းသင်္ချာဗေဒင်သည် အနောက်တိုင်းနည်းကို အခြေခံထားသဖြင့် မြန်မာ ရက် ၊လ၊ နှစ် မွေးရက်များကို မယူပဲ ခရစ် ရက် လ နှစ်ကို တည်လျှက် ဟောကိန်းထုတ်ယူရပါသည်။ ဂဏန်းအားဖြင့် ၁ မှ ၉ အထိ ဂဏန်းတစ်လုံးချင်း၏ရာထူးဂုဏ် ၊ ဝိသေသနနှင့် အမူအကျင့် များသည် မတူညီကြပါ။ ကိန်းဂဏန်းတို့သည် ဂြိုဟ်တို့ကို ကိုယ်စားပြုကြသည် ဖြစ်သည်။ ၁ ဂဏန်း …
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က မာနနှင့် မွေးလာဒါကြောင့် မာနလေး ထားကြည့်ပါ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က မာနနှင့် မွေးလာဒါကြောင့် မာနလေး ထားကြည့်ပါ သူမခေါ်ရင် ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲ နေနိုင်တဲ့ မာနလေး ထားကြည့် ပါလို့ ကျွန်မ ပြောတဲ့အခါ ပထမဆုံးတွေးကြတာက ဝေးသွားမှာပေါ့ တဲ့ ။ အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ပဲ နာကျင်ခံစားနေ ရတာလေ ။ ဝေးသွားမှာစိုးလို့ မချစ်တော့မှာ ဆိုးလို့ ပစ်သြားမွာစိုးလို့ ဆိုတဲ့ သောကတွေနဲ့ မာနေတြ ဘယ်လောက် ခဝါချခဲ့ပြီးပြီလဲ တွေးကြည့်ပါ ။] နောက်ဆုံး ကိုယ်ပဲ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်းကျန် ခဲ့တာပဲ ရှိတယ် တကယ် မချစ်ခဲ့တဲ့သူ အတွက်တော့ လမ်းခွဲဖို့ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံရှိနေနိုင် တာပဲလေ ။ အတွေးတွေ အများကြီးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် …
ဇနီးစကား နားထောင်ပါ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်လို့ ပျက်စီးသွားတဲ့ ယောက်ျားမျိုးမရှိပါဘူး
ဇနီးစကား နားထောင်ပါ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်လို့ ပျက်စီးသွားတဲ့ ယောက်ျားမျိုးမရှိပါဘူး အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကား နားထောင်လို့ ပျက်စီးသွားတဲ့ … … ယောက်ျားမျိုးမရှိပါဘူး ။ ။ ။ ။ ။ ။ ယောက်ျားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီး…ပျက်စီးသွားတဲ့ယောက်ျားတွေပဲရှိတာပါ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ မိန်းမ စကား အရမ်းနားထောင်နေလို့ သင့်ကို သင့်friတွေမယားကြောက်လို့အမည်တပ်ပေမယ့် ။ ။ ။ ။ ။ သင့်မှာ သင့်မိသားစု သင့်ကလေးကိုငဲ့လို့friတွေနဲ့လျောက်မသွားတဲ့အခါ မယားကြောက်လို့ သင့်အမည်တပ်ခံရပေမယ့် သင့်ကလေး သင့်ဇနီးအတွက်တော့ … … … သင်ဟာ …
ခွင့်လွှတ်နားလည်ခြင်း အားကြီးသူတွေရဲ့ ဖူးစာဖက်ဆိုတာ…
ခွင့်လွှတ်နားလည်ခြင်း အားကြီးသူတွေရဲ့ ဖူးစာဖက်ဆိုတာ… ခွင့်လွှတ်နားလည်ခြင်း အားကြီးသူတွေရဲ့ ယခုဘဝဆုံဆည်းခြင်းက မေတ္တာမျှနေသူဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ် ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ အတိတ်ဘဝတွေ က ခွင့်လွှတ်ခြင်း မရှိ တဦးကို တဦး အနိုင်ယူခြင်းတွေ အားကြီး နေခဲ့ကြရင် ယခု ဘဝ ဆုံဆည်းမှုက ရန်သူတွေ အဖြစ် ဆုံဆည်း ရတတ်ကြပါတယ် ။ ။ ။ ။ ။ အတိတ်ဘဝတွေ က ပေးဆပ်ခြင်း မရှိ တဦးကို တဦး ရလိုမှုတွေ အားကြီး နေခဲ့ကြရင် ယခု ဘဝဆုံဆည်းမှုက မုန်းသူတွေ အဖြစ် ဆုံဆည်း ရတတ်ကြပါတယ် …
ကပ်ဘေးကာလမှာ သင်ကံထူးလို့ ကမာကောင်ထဲကဘုရားပုံကိုဖူးရပြီ
ကပ်ဘေးကာလမှာ သင်ကံထူးလို့ ကမာကောင်ထဲကဘုရားပုံကိုဖူးရပြီ ယနေ့ခေတ်တွင် အတော် ကြောက်စရာ ကောင်းလာ၏ ။ ခရီးသွားချင် စိတ်တောင် တချို့နေရာတွေ မသွားမလာရဲ အောင် ဖြစ်မိ၏ ။ သတင်းတွေ ကလည် အနိဋ္ဌာ ရုံံတွေကသာ များလာသည် ဟိုနေ ရာဖြင့် ကားတိုက်တာ ဆိုင်ကယ်မှောက် ဟိုနေရာဖြင့် ဓာက်လိုက် စသဖြင့်ပေါ့လေ မကြားချင်လှအဆုံးပါပဲ ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် မိတ် ဆွေကြီးများကို နိုင်ငံခြားမှာ ဖြစ်ဖြစ် အဝေးတစ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားလာ လှုပ်ရှားနေသူ ဖြစ်ဖြစ် အန္တာရာယ် ကင်း စေချင်သည် အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည် ။ လူတိုင်း အန္တာရာယ် ကင်းချင် …
ဖုန်းအလင်းရောင်အမြင့်ဆုံးထားသုံးလို့ မျက်စိပျက်မယ့်အရေးကြုံတွေခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေး စမတ်ဖုန်း ကို အလင်းရောင်အမြင့်ဆုံးနဲ့ ၂ နှစ်ကျော်ကြာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ် က အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ သူ့မရဲ့ မျက်ကြည်လွှာမှာ အပေါက်ပေါင်း ၅၀၀ ဖြစ်ပွားတာအပါအဝင် ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ မျက်လုံးပျက်စီးမှုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ OC သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူက အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ချန်းဆိုသူပါ။ သူမဟာ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အသက်မွွေးနေသူဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင်အရ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေကို အချိန်မီပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ဖို့ ဖုန်းကို အမြဲတစေအသုံးပြုရသူပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းက ချန်းဟာ နေရောင်အောက်မှာ ဖုန်းကိုအသုံပြုနိုင်ဖို့ သူ့ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်အလင်းရောင်ကို အမြင့်ဆုံးမှာ ထားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ သူမဟာ ဖုန်းအလင်းရောင်ကို ပြန်မချိန်ညှိတော့ဘဲ …
ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့ သဘာဝရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်ပြုလုပ်နည်း ကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက် ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ဘယ်လိုနှပ်သလဲ..? ကိုယ်ခံစွမ်းအား အထူးသဖြင့် အဆုပ်အတွက် ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ဂျင်းတို့ကို ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်မျိုး အဖြစ်ဖြင့်လည်း သောက်ကြတယ်။ ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ရေနွေးကြမ်းလို့ ပြောကြတဲ့ လက်ဘက်ရည်ကြမ်းနဲ့ နှပ်လို့ ရတဲ့ ရှေးနည်းဟောင်းတစ်ခုကို တင်ပြလိုပါတယ်။ ဂျင်း၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ အာယုဗေဒကျမ်းများတွင် အကျယ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယခု အကျဉ်းမျှ ရေးပါမယ်။ အဓိကအားဖြင့် အစာမကြေခြင်းကို ပြေပျောက်စေတယ်။ကြက်သွန်ဖြူက ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်း ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ကျော်ကြားသည်။ နှစ်ခုစလုံး အလွန်အစွမ်းထက်သော အပင်များဖြစ်တယ်ဆိုရာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မဟုတ်ပါ။ အဲဒီနှစ်မျိုးကို …
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ… တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ… တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ … သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ ” (တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညသည် သူခိုးကြီးည လုံးဝမဟုတ်ပါ ။ ) တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် အဇာတသတ် ရှင်ဘုရင်းအား သာမညဖလ သုတ်တော်ကို ဟောတော်မှု၍ ဘုရင်နှင့်တကွ နောက်ပါပြည်သူ ( ၁ ) သိန်းခန့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်တဲ့ ညကြီးပါ။ ဒီလို ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနေ့ကြီးကို မသမာသူများက စုတ်ပျက်အောင် သူခိုးညဆိုပြီး နာမည်တပ်လိုက်တော့ အမှန်တရားက ပျောက်ကွယ်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည၌ …
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဒီအပြုအမူတွေကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ် . . . . . . . . . . .
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဒီအပြုအမူတွေကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ် . . . . . . . . . . . လူတစ်ယောက်စိတ်ကို ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲလို့ သင်တွေးမိနေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို မျက်လုံးတွေ၊ အမူအရာတွေနဲ့ဖော်ပြလေ့ရှိကြတယ်။ သတိမထားမိလို့သာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ဖြစ်နေတာပါ . . . . . . . . . . အပြုအမူ၊ အမူရာတွေအကြောင်းအသေးစိတ်လေ့လာထားတဲ့ သြစတေးလျ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Alan Pease က လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို သူ့ရဲ့အမူရာတွေကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတရအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် . . . …
Previous 1 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 … 305 Next